एडल्फ हिटलर एक शाकाहारी थियो | Apg29
पूर्वप्राथमिक शाकाहारी खान सबै बच्चाहरु è
म त्यहाँ शाकाहारी खान सबै बच्चाहरु गरेर "जलवायु सुरक्षित" गर्न चाहने उत्तरी स्वीडेन मा एक किंडरगार्टन छ कि पढ्दा म एडल्फ हिटलर संग यस बारे लाग्यो। के भइरहेको छ?
"केही मासु हिटलर एक शाकाहारी थियो, थिएन। भोजन, राम्रो धेरै राम्रो थियो, तर हामी यसलाई आनन्द कहिल्यै सकिएन।"
यो हिटलर को एक बताउँछन् provsmakerska द्वितीय विश्व युद्ध बाँचे कि Margot Wölk। हिटलर गरेको व्यञ्जन मा तरकारी, सस, चाउचाउ व्यञ्जन र विदेशी फल थिए।
युद्ध को लागि हिटलर खाना योजना
त्यहाँ हिटलर किन शाकाहारी थियो फरक राय छन्। शायद यो किनभने स्वास्थ्य कारणहरू उहाँले आफ्नो पेट समस्या थियो किनभने थियो।
गर्न Joseph Goebbels लेख्न आफ्नो डायरी, अप्रिल 26, 1942 मा:
"हाम्रो कुराकानी को एक धेरै भाग शाकाहारी प्रश्नको नेता समर्पित। उहाँले कहिल्यै कि मासु खाने मानवता लागि हानिकारक छ भन्दा बढी विश्वस्त छ। निस्सन्देह, उहाँले युद्ध समयमा मूलतः हाम्रो खाद्य आपूर्ति परिवर्तन गर्न सक्दैन भनेर थाह छ। तर युद्ध पछि, उहाँले यो समस्या सामना गर्न चाहन्छ। शायद उहाँले सही। "
म त्यहाँ गरेर "जलवायु सुरक्षित" गर्न चाहने उत्तरी स्वीडेन मा एक किंडरगार्टन छ कि पढ्दा म एडल्फ हिटलर यो बारेमा विचार शाकाहारी खान सबै बच्चाहरु । के भइरहेको छ?
सबै खाना purified
बाइबल तपाईं खाना सबै प्रकारका खान प्राप्त। कुनै निषेध छ। को जलवायु न त हामी खान खाना कस्तो लागि कुनै समस्या शायद वहाँ छ, तर त्यहाँ अन्य पर्याप्त समस्या हो। खैर, आफ्नो शरीर सबै खाना शुद्ध, जो येशू आफैले भन्छन्।
मार्क 7:18। त्यसपछि उहाँले [येशूले] तिनीहरूलाई भन्नुभयो: तपाईं पनि त मूर्ख हुनुहुन्छ? तपाईं उसलाई मा बाहिर बाट आउने उहाँलाई गंदा गर्न सक्ने केही बुझिन? 19. यसको लागि आफ्नो मनमा तर जो मार्फत पेट, मा जान गर्छ सबै खाना purified गर्न र यसको प्राकृतिक अन्त छ।
एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ
यसबाहेक, यो पनि बाइबलमा यो रुचि छ:
प्रेरित 15:28। पवित्र आत्मा र हामी बाहेक यो आवश्यक छ कुनै ठूलो बोझ तिमीहरूमा राख्नु हुँदैन निर्णय गरेका छौं:
म उपयोगी र बेकारी छ के यो रुचि आत्म कारण: यो शायद कुनै समस्या हुनेछ ठिक्क सबै खानुहोस्।
कस्तो सान्त्वना यो हामीलाई दिन्छ। हामी संग व्यवस्था र नियन्त्रण धेरै बचत गर्न मुछिन छैन। कुरा केवल एक महत्त्वपूर्ण छ र येशूले स्वीकार गर्न र सुरक्षित हुन छ।
म एक पल्ट किनभने यो उपयोगी हुनेछ जसले गाजर को रस दुई लिटर एक दिन पिए एक डाक्टर पढ्न। उहाँले हरेक दिन सम्हाल्न सकेन धेरै गाजर को रस आफ्नो कलेजो को cirrhosis को मृत्यु भयो।
को जलवायु यो मान्छे नियन्त्रण गर्न टालटुल जस्तो देखिन्छ। एक एजेन्डा कस्तो साँच्चै पछि छ? अन्ततः सिंहासनमा एटिक्राईष्ट राख्न सक्षम छ?
के तपाईं खान के को डर पर्दैन, र खराब अन्तस्करण गर्न आवश्यक छैन। खान र राम्रो लाग्छ। व्यवस्थित र आफ्नो जीवन नियन्त्रण गर्न विभिन्न तरिकामा आउछ प्रचार लागि गिर छैन। यस्तो प्रचार थप र थप हामी अहिले बाँच्ने समय प्रस्ट हुँदै गईरहेको छ। यो पटक को एक चिन्ह हो।
सबै भन्दा आफ्नो जीवनमा महत्त्वपूर्ण र महत्वपूर्ण छ भनेर मात्र कुरा के तपाईं येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण र सुरक्षित हुन छ!
रोम 14:17। परमेश्वरको राज्यको लागि पवित्र आत्मा मा खाना र पेय तर धार्मिकता र शान्ति र आनन्द छ।